Led ပြောက်အလင်းစီးရီး, Led Track ပြောက်အလင်း, Mini ကို Led ပြောက်အလင်းတရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. ကမ်းလှမ်းရန်
ဖေါ်ပြချက်:Led ပြောက်အလင်းစီးရီး,ဦးဆောင် Track ပြောက်အလင်း,Mini ကို Led ပြောက်အလင်း,Led ပြောက်အလင်း,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး > LED ပြောက်အလင်းစီးရီး
LED ပြောက်အလင်းစီးရီး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Led ပြောက်အလင်းစီးရီး, ဦးဆောင် Track ပြောက်အလင်း ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Mini ကို Led ပြောက်အလင်း R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အစက်အပြောက်အလင်းအိမ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဦးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးနှင့်တူ၏။ သူတို့ကအများအားဖြင့်အိမ်ပြင်အသုံးပြုကြသည်။ ဖောက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်တယ်, ဒါအသုံးပြုမှုလည်းကွဲပြားခြားနားသောကွောငျ့ကို projector ဆီမီးမိုးလုံလေလုံအသုံးပြုမှုလည်းရှိပါတယ်။...
LED ပြောက်အလင်းပုံမှန်ဖြစ်ပြီးသေးငယ်တဲ့အစို့တစ်တန်းဆီမီးမြင့်တက်ပေါင်းစပ်လျှင်, အလင်းအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်, မိုးလုံလေလုံ illume လေထုတည်ဆောက်နိုင်, အဓိကဆီမီးခွက်, အဓိပ္ပါယ်စကေး illume မရှိပါဘူးသောခေတ်သစ်ကျောင်းကမရှိဘူး။...
တရုတ်နိုင်ငံ LED ပြောက်အလင်းစီးရီး ပေးသွင်း
အလင်းကိုရိုက်ကူးဖို့ LED, အင်္ဂလိပ်အမည်အားမီးထိုး LED သည်လင်းအရင်းအမြစ်, အများဆုံးချီးကျူးတွေထဲကအလင်းကိုရိုက်ကူးဖို့ LED ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ် LED လုပ်ထားတဲ့မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏ပိုပိုပြီးအတူလူကြိုက်အများဆုံးစွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ် အခြားအ LED မီးခွက်ကိုကိုင်နှိုင်းယှဉ်ပါက, LED မီးခွက်သည်စျေးနှုန်းအနိမ့်သည်။ LED မီးခွက်သည်အဓိကအားဖြင့်စသည်တို့ကိုအလှဆင်ခြင်း, စီးပွားဖြစ်အာကာသ, အလင်းရောင်နှင့်အဆောက်အဦအလင်းရောင်များအတွက်အသုံးပြုသည်, LED နည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, LED မီးခွက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်အားသာချက်များ၏စျေးကွက်သည်အလွန်ထူးချွန်, မြင့်သောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်လူမီနီယံရောင်ပြန်ဖြစ်ပါသည်, လေဆာရောင်ခြည်အများဆုံးတိကျ နှင့်ရောင်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်၏ အချိုးကျထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုကျဉ်းမြောင်းသောထောင့်, ကျယ်ပြန့် Angle နှင့်အချိုးမညီအမျှအလင်းဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များကို၎င်း, ပရိုဂျက်တာဆီမီးခွက်တစ်စကေးပန်းကန်တပ်ဆင်ထားသည်, လူတွေအတိုင်းအတာအရသိရသည်အဆင်ပြေအဆိုပါဓါတ်ရောင်ခြည် Angle ညှိနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်နဲ့ LED ပရိုဂျက်တာရှေ့မှာမီးခှကျ back-up switch သည်ဖြင့်အစားထိုးသည်။ အဆိုပါအလင်းရောင်အလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုဦးပထမဦးဆုံးမှုနှုန်းဖြစ်ပါသည်, နဲ့ LED projection ဆီမီးခွက်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲမှု, ခုန်, အရောင်တောက်ပ, ကျပန်း Flash ကို, တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲမှု, Chase နှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့၏ dynamic သက်ရောက်မှုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
1. LED မီးထိုးနိမ့်ဗို့အားတိုက်ရိုက်လက်ရှိအားဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်: ကသေးငယ်တဲ့ဝန်နှင့်အားနည်း်ရောက်စွက်ဖက်၏အားသာချက်များရှိပါတယ်, နှင့်အသုံးပြုမှု environment.2 အပေါ်အနိမ့်လိုအပ်ချက်များရှိနေသည်။ သူတို့ကောင်းစွာပြတိုက်နှင့်ပြပွဲခန်းမများတွင်ဒေသခံသို့မဟုတ် key ကိုအလင်းရောင်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် LED မီးထိုးခြင်း, တောက်ပရောင်စဉ်ကောင်းစွာ၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
3. LED မီးများ၏တောက်ပ Direct spotlights အလွန်တန်ခိုးကြီး: အတောက်ပကို attenuation ရိုးရာအလင်းရင်းမြစ်များ၏ထိုထက်အများကြီးနိမ့်ဖြစ်ပြီး, LED မီးထိုး၏စျေးနှုန်းမျှမျှတတအရပ်သားဖြစ်ပါတယ်။
4. LED မီးများ၏တုံ့ပြန်မှုအချိန် spotlights အလွန်မြန်: အ microsecond အဆင့်မှာ, နေသမျှကာလပတ်လုံး switch ကိုပေါ်သည်အတိုင်း, ကမဆိုနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်တုန်ခါမှုတွေမရှိဘဲချက်ချင်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
5. LED မီးထိုး၏အလင်းစွမ်းအင်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုအလွန်မြင့်မားသည်: ကမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့်အတူငယ်လေးတစ်လှိုင်းအလျား window တွင်အာရုံစိုက်နေပါတယ်။
LED ကဆီမီးကွန်ဒတ်တာ device ကိုဖြစ်ပြီး, တောင်မကြာခဏ switching န်ဆောင်မှုဘဝအကျိုးသက်ရောက်စေမည်မဟုတ်သောကွောငျ့ 6. ဝန်ဆောင်မှုအသက်, ယေဘုယျအားဖြင့် 50000 နှင့် 100000 နာရီအကြားအလွန်ရှည်လျားသည်။
ထုတ်လုပ်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အလင်းရိုက်ကူးဖို့ LED 7. ကောင်းမွန်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဖန် shell ကို, ကောင်းမွန်သောသက်ရောက်မှုခုခံ, ကောင်းသောထိတ်လန့်ခုခံ, ကျိုးမှ invulnerability လိုအပ်ပါတယ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့ပါဘူး, အစလေထုမလိုအပ်ပါဘူး, "ပြဒါး" add ကြဘူး "အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်", ထို LED မီးခွက်သည်စျေးနှုန်းအဖြစ်လူသိများ, အလွန်အစိမ်းရောင်။
8. စွမ်းအင်ချွေတာရေး, LED မီးများ၏ရောင်စဉ် spotlights ထည့်ယေဘုယျအားဖြင့်စွမ်းအင်ကိုချွေတာမီးခွက် 4/5 များ၏စွမ်းအင်-ချွေတာရေးကြောင်းယုံကြည်ရသည်မြင်နိုင်အလင်း frequency band အတွက်အားလုံးနီးပါးအာရုံစိုက်သည်နှင့်၎င်း၏တောက်ပထိရောက်မှု 80 ~ 90% ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် အလွန်ကြီးစွာသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုပေမယ့်မီးထိုး LED အစိုင်အခဲအလင်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်သောစွမ်းအင်ချွေတာမီးခွက်ထက်ထိရောက်ထက်ပို 1/2 စွမ်းအင်ဖြစ်ကြသည်။
Led ပြောက်အလင်းစီးရီး ဦးဆောင် Track ပြောက်အလင်း Mini ကို Led ပြောက်အလင်း Led ပြောက်အလင်း အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး